Abavelisi be-PDR yeglue Abavelisi - i-China PDR iithebhu zeglue abavelisi kunye nababoneleli
I-4PCS Aluminium Glue Puller Tabs
Inombolo yento: BT211018
Inezibonelelo zomsebenzi olula, zilungiselele ngokwakho. Ukukhuselwa kwendalo kwaye ayonakalisi ipeyinti yoqobo. Ukutshintsha iithebhu ngeendlela ezahlukeneyo ngeenjongo ezininzi.
I-6pcs i-Tabs ye-Aluminium yokutsala iiThabhu ze-PDR zeThabhu zeMoto zoLungiso lweMoto
Inombolo Umba: BT211017
I-18PCS i-Glue Tabs Setha i-Glue Ukutsala iiThabhu Isixhobo soMzimba weDent Remover Isixhobo seGlue Puller Sets
Inombolo yento: BT211016
Le seti yee-18pcs iithebhu zokutsala zenziwe ngeplastiki ehlala ixesha elide kunye nolwakhiwo oluqinileyo, ukhuselo lokusingqongileyo. Iyilwe ngobuchule ngobukhulu obahlukeneyo bokungqengqa okuncinci kwimoto, ifriji, umzimba wesithuthuthu kunye nomatshini wokuhlamba, njl.
I-19PCS I-PDR ye-Glue Tabs Isixhobo sokuLungisa i-Dent Isixhobo sokuTsala iiTab
Inombolo Umba: BT211015
1. Ngokukhawuleza kwaye kulula ukuyilungisa yonke intlobo yeentsimbi ezincinci.
2. Khetha iithebhu ezahlukeneyo zeglu ezinobungakanani obahlukeneyo bezinto ezahlukeneyo.
3. Lungisa isifotho uphephe ukonakalisa ipeyinti yoqobo.
4. Uyilo oluhlala luhleli kunye nokunyuka kwamandla e-axial kuvumela iipropathi zokubambelela eziphezulu.
5.Ingasetyenziswa kwimoto, ifriji, umzimba wesithuthuthu, kunye nomatshini wokuhlamba, njl.
Iyilwe ngobungcali ngokobukhulu obahlukeneyo bokungafani okuncinci kwimoto, ifriji, umzimba wesithuthuthu, kunye nomatshini wokuhlamba, njl. ezinye izixhobo zokutsala, kunye nokulungisa i-dent kuthintela ukonakalisa ipeyinti yoqobo.
I-120PCS i-PDR i-Glue Tabs Izixhobo zokuLungisa iiMoto zeGlue
Inombolo yento: BT211014
Udidi lobungcali lokutsala iithebhu zeemoto.
Iithebhu ezingama-56PCS PDR zeglu
Inombolo yento: BT211013
Le seti yee-56pcs iithebhu zokutsala yenziwe ngeplastiki ehlala ixesha elide kunye nolwakhiwo oluqinileyo, ukhuselo lwendalo Iyilwe ngobungcali ngokobukhulu obahlukeneyo bokungafani okuncinci kwimoto, ifriji, umzimba wesithuthuthu, kunye nomatshini wokuhlamba, njl. ezinye izixhobo zokutsala, kunye nokulungisa i-dent kuthintela ukonakalisa ipeyinti yoqobo.
Ukuba unomdla kuyo nayiphi na i-56PCS yeGlue Tabs Set okanye ungathanda ukuxoxa ngomyalelo wesiko, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi. Sijonge phambili ekwenzeni ubudlelwane obunempumelelo kwezoshishino kunye nabathengi abatsha kwihlabathi liphela kungekudala.